I-OnePlus iqoqa idatha ethile kubasebenzisi ngaphandle kwemvume yabo | Izindaba zamagajethi
I-OnePlus iqoqa idatha ethile kubasebenzisi ngaphandle kwemvume yabo
Yilokho uChris Moore, umnikazi webhulogi yezokuphepha nobuchwepheshe obususelwa e-UK, athi i-OnePlus iqoqa idatha ecaciswe kubasebenzisi njengoba i-IMEI yamafoni akho, ikheli le-MAC, inombolo yocingo nabanye ngaphandle kwemvume yabo.
Akusilo ihlazo lokuqala inkampani yenkampani ye-OnePlus ebhekane nalo kulesi senzakalo, futhi lanikezwa ubunzima obukhulu balolu daba, kuba okungaqondakali ukuthi nginikeza izincazelo ezigculisayo.
1 Ukwenza ngcono ulwazi lomsebenzisi ngokwephula ubumfihlo babo, lokho kubonakala kuyinqubomgomo ye-OnePlus
1.1 Hlobo luni lwedatha i-OnePlus eqoqa ngaphandle kwemvume yabasebenzisi?
1.2 Ingabe likhona ikhambi lenkinga?
2 Futhi i-OnePlus icabangani ngale mpikiswano?
Ukwenza ngcono ulwazi lomsebenzisi ngokwephula ubumfihlo babo, lokho kubonakala kuyinqubomgomo ye-OnePlus
Phambilini, i-OnePlus bekufanele ibhekane nezinkinga eziningi kule minyaka embalwa edlule, ikakhulukazi maqondana nokuhluleka kwayo ukunikeza ukwesekwa okwanele kumakhasimende ayo. Ngaphezu kwalokho, ngemuva kokwethulwa kwe-OnePlus 5, kwavela imibiko eyakhuluma ngokukhohliswa kwamabhentshimakhi, izikrini ezifakwe kabi ngisho nabasebenzisi abangakwazi ukubiza abezimo eziphuthumayo uma beyidinga. Yebo, manje kuza inkinga ebucayi kakhulu kunalezo ezedlule nangaphambi kwazo abasebenzisi kumele bafune incazelo ecindezelayo nephuthumayo.
UChris Moore, ongumnikazi webhulogi yezokuphepha nobuchwepheshe e-UK, uthumele i-athikili lokho bekungafika ukukhombisa lokho I-OnePlus ibilokhu iqoqa imininingwane yomuntu kusuka kubasebenzisi futhi iyithumela ngaphandle kwemvume yayo.
Hlobo luni lwedatha i-OnePlus eqoqa ngaphandle kwemvume yabasebenzisi?
Lokhu kutholakala kwenzeke emcimbini weSAN Holiday Hack Challenge lapho uMorey kutholwe isizinda esingaziwa, futhi yanquma ukulihlolisisa. Yini ebikwenza leso sizinda - open.oneplus.net - bekuyisisekelo qoqa idatha yomsebenzisi kusuka kudivayisi yakho bese uyidlulisela kusibonelo se-Amazon AWS, konke ngaphandle kwemvume yakho.
Phakathi kwedatha i-OnePlus efinyelela kuyo kukhona kusuka olwazini lwedivayisi uqobo njengekhodi ye-IMEI, inombolo ye-serial, inombolo yocingo, ikheli le-MAC, igama lenethiwekhi yeselula, isiqalo se-IMSI nenethiwekhi engenantambo i-ESSID ne-BSSID, kwimininingwane yomsebenzisi njengokuqalisa kabusha, imithwalo, amafulegi, ukusetshenziswa kohlelo lokusebenza nokuningi.
Ingabe likhona ikhambi lenkinga?
Ngokusho kukaMorey, ikhodi ebhekele lokhu kuqoqwa kwedatha iyingxenye Yesiphathi Sedivayisi ye-OnePlus noMhlinzeki Womphathi Wedivayisi we-OnePlus. Ngenhlanhla, uJakub Czekanski uthi yize kuyinsizakalo yohlelo, lokhu kungakhubazeka unomphela ngokufaka i-net.oneplus.odm ye-pkg nge-ADB noma ngokusebenzisa lo myalo: pm uninstall -k -user 0 pkg.
Futhi i-OnePlus icabangani ngale mpikiswano?
Yebo, ngokuyisisekelo, akukho okunye esingakusho ngaphezu "kokushelela". Ngokusobala, i-OnePlus ingomunye wabakhiqizi ababaluleke kakhulu bezingcingo ze-Android, inesisekelo somsebenzisi esibalulekile, nokuthi bekuqoqwa futhi kudluliswa imininingwane yomsebenzisi ngaphandle kwemvume yabo, kubucayi ngohlobo lwesenzo, okuningi maqondana nomthamo wabantu abathintekile. Kepha okukhathaza kakhulu ukwedlula i- I-OnePlus kubonakala ngathi ayiyibheki njengento enkulu. Kuthintwe Abaphathi be-Android maqondana nokutholakala kukaChris Moore, inkampani izilinganisele ekutheni imininingwane eqoqiwe ihloselwe ukuxhasa abasebenzisi uqobo, ngaphandle kokuphendula nganoma iyiphi indlela emibuzweni ephathelene nobumfihlo balabo amakhasimende.
Sikudlulisa ngokuphephile ukuhlaziywa okuvela emifudlaneni emibili ehlukene nge-HTTPS kuseva ye-Amazon. Ukugeleza kokuqala ama-analytics okusetshenziswa, esiwaqoqayo ukuze sikwazi ukulungisa ngokunembile isoftware yethu ngokuya ngokuziphatha komsebenzisi. Lokhu kudluliselwa komsebenzi wokusetshenziswa kungakhutshazwa ngokuzula uye kokuthi 'Izilungiselelo' -> 'Okuthuthukile' -> 'Joyina uhlelo lomuzwa womsebenzisi'. Ukugeleza kwesibili imininingwane yedivayisi, esiyiqoqayo ukunikeza insizakalo engcono emva kokuthengisa.
UBrian Reigh, we-Android Authority, uphawula ukuthi babuye baxhumana futhi bakhuluma nommeleli we-OnePlus kodwa, "asitholanga incazelo egculisayo yokuthi kungani inkampani ingavumeli abasebenzisi ukuthi bakhethe ukwabelana ngemininingwane yabo ukusiza ngezibuyekezo ezizayo ». Futhi uyaqhubeka: "indida nakhu ukuthi i-OnePlus yephula ubumfihlo babasebenzisi bayo ukuhlinzeka insizakalo engcono emva kokuthengisa. Kubo bonke abenzi, inkampani ekwazile ukuthukuthela futhi ikhungathekise abasebenzisi abaningi impela ngenxa yokushoda kwayo kokuxhaswa ngemuva kokuthengisa izama ukuthethelela ukuqoqwa kwayo okungagunyaziwe kwedatha ngesizathu sokuthi ingeyokuxhaswa ngemuva kokuthengisa. "
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Izaziso » I-OnePlus iqoqa idatha ethile kubasebenzisi ngaphandle kwemvume yabo
Isandiso somgunyathi esibizwa nge-Adblock Plus ye-Chrome sishaya isitolo se-Web Chrome
AbakwaSamsung baqala umshini wokuhlanza irobhothi ofana noDarth Vader